IBushies ithanda ityotyombe - I-Airbnb
IBushies ithanda ityotyombe
Ifama sinombuki zindwendwe onguFay
Wamkelekile kwiBushies Love Shack. Ukuthiywa kwetyotyombe lothando kwenzeka ngexesha lokuthenga le ndawo kwiminyaka esi-8 eyadlulayo. Utata kaFay, ngelo xesha wayeneminyaka engama-90 ubudala, kunye nentombi awayethandana nayo, eneminyaka engama-91 ubudala, ngokuzenzekelayo bayibiza ngokuba yi-Love Shack njengoko babecinga, xa sele belungisiwe, behleli ebhedini, bedlala amakhadi kwaye bejonge kwaye igama lancamathela. . Ngokuhambelana negama, sidale ubutofotofo, indawo yothando yababini.
I-Bushies Love Shack ifanelekile ukubaleka kwezothando okanye uxolo olulula kunye nokuzola. Ibandakanya ibhedi yobukhulu bukakumkanikazi, igumbi lokuhlambela labucala elineebhafu zodidi oluphezulu, ikhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya, umatshini wekofu kunye neqanda & nebhekoni yesidlo sakusasa kunye nebhotile encomekayo ye-Feathertop yewayini eyenziwe ekhaya iimuffins kunye ne-nibbles ekufikeni kwayo.
Elona khadi likhulu letyotyombe elinokunikwa lityotyombe lethu elihle lokuhlambela langaphandle .Ibhafu inemigca yobhedu kwaye ilingana nabantu ababini ngokukhululekileyo yindlela enye yokuphumla kunye nokusela iwayini yakho kwaye ukonwabele ukuzola kunye nobuhle betyotyombe, sikwabonelela ngebhafu. iibhombu kunye neetyuwa ukukunceda ukonwabele amava.
Ityotyombe lihonjiswe ngaphakathi kwaye lihonjisiwe ungalibali ukukhankanya ibhedi yeyokufa ngamashiti ayo agqwesileyo njl.njl iinkwenkwezi ezi-5
Njengokuba sibathanda abantwana nabantwana.
Njengoko sele kukhankanyiwe sidale elityotyombe lihle lenzelwe abantu abathandanayo kuphela
NGENXA YESIKHATHI asiyi kwamkela ukubhukisha ukongezwa
abantwana okanye iintsana...ukusindisa ukuphoxeka kwakho ndicela ungabuzi.
5.0 out of 5 stars from 367 reviews
5.0 · Izimvo eziyi-367
IPorepunkah kunye neBright ziilokishi ezintle kuMntla Mpuma weVictoria. Kufuneka uyibone ekwindla naseNtwasahlobo kodwa ikwayindawo entle ebusika eneMt Hotham kunye neFalls Creek kufutshane.
Iibhayisekile ze-BYO okanye iiBhayisekile ziyafumaneka…
Hamba ngebhayisekile ecaleni kwendlela kaloliwe okanye uhambe / uqhube ungene kwiilokishi zasePorepunkah (9mins drive, 6.8km walk) kunye neBright (16mins drive, 13.3km walk), ibonelela ngeendawo zokutyela ezininzi, iikhefi kunye neevenkile okanye uqhubele phambili ukuya kwiGrand Old Lady kwaye uthathe. kwimibono emangalisayo.
Iindwendwe ezifuna ukuhlala ubusuku obu-1. nceda uzive ukhululekile ukubuza
Umbuki zindwendwe ngu- Fay
Ukuba ikhona iFay iyakuvuyela ukukuthatha uhambo olukhokelwayo lweyure ezi-2-4.
UBushie uyafumaneka ukuze utshintshelwe/usuka eBright ukuba unqwenela ukuphumla kwaye ube nesidlo sangokuhlwa neziselo edolophini
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porepunkah